Chris Benham's Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Chris Benham
Chris anoziva kuti kushambadzira kukuru kunoitwa nekuteerera vatengi vako - kwete kutaura kwavari. Akaisa kufunga uku kubatsira kusimudzira makambani akati wandei kumisika-inotungamira nzvimbo. Kumhanya kushambadzira kwe Alchemer inopa Chris mukana usingaenzanisike wekugadzira kushambadzira kunoenderana nevatengi zvichienderana nemhinduro yavo. Chris akabatana naAlchemer mushure mekubata masimba ekushambadzira makuru kuSymantec, Avast, Webroot, uye Yellowfin BI. Iye akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeKansas.
3 Zvidzidzo kubva kune Chokwadi Vatengi-Centric Makambani
Chipiri, August 10, 2021 Chishanu, February 11, 2022 Chris Benham
Kuunganidza mhinduro yemutengi idanho rekutanga riri pachena mukupa zvakanakisa zvevatengi zviitiko. Asi inongova nhanho yekutanga. Hapana chinoitwa kunze kwekunge iwo mhinduro inotyaira imwe mhando yechiito. Kazhinji kacho mhinduro inounganidzwa, yakaunganidzwa mudhatabhesi yemhinduro, yakaongororwa nekufamba kwenguva, mishumo inogadzirwa, uye pakupedzisira hurukuro inoitwa ichikurudzira shanduko. Panguva iyoyo vatengi avo vakapa mhinduro vakaona kuti hapana chiri kuitwa nemazano avo uye vatora